Turkiga oo ka tilaabsaday taako Ingiriiska u dhigay - Madaxweyne Garguurte oo aqbalay Casuumaad.
Topnews:-Turkiga oo ka tilaabsaday taako Ingiriiska u dhigay - Madaxweyne Garguurte oo aqbalay Casuumaad.
09 April 2013 Waagacusub.com-Madaxweynaha Somalia Hassan Mohamud Alasow ayaa wada hadalada Maamulka Somaliland ee Turkiga u xilsaaray wafdi heer Wasiiro ah oo Fawsiya Xaaji Adam madax u tahay kadib markii Dowladda Ingiriiska Cadaadis ku saartay inaan ahmiyad la siin shir gaarsiisan heer Madaxweyne Qaran. Madaxda Turkiga oo ka sii warqabtay in Dowladda Ingiriiska xasaasiyad ka qaaday shirka Maamulka Somaliland iyo Dowladda Federalka lagu wada hadalsiinaa ayaa halkii laga sugayay inay Dowladda dhexe u soo dirto Casuumaad ku saabsan wada hadalada waxaa Madaxweyne Hasaan Garguurte la gaarsiiyay Casuumaad uu si rasmiya ugu fidiyay Madaxweynaha Dalka Turkiga .sida ay Waagacusub u sheegeen Wasiiro iyo Saraakiisha Villa Somalia.
Madaxweyne Garguurte oo gambar gaabin ugu fadhiyay in Madaxda Turkiga kala hadlaan qadiyadda wada hadalka Somaliland ayey danta ku qasabtay inuu si deg dega iskugu diyaariyo Safar uu ku tago Ankara maadama uu Martiqaad deg dega ka helay Madaxweynaha Turkiga.
Safaaradda Ingiriiska ee Somalia ayaa la soo weriyay inay filan waa ku noqotay safarka Madaxweyne Hassan berri ugu bixi doono Turkiga maxaa yeelay waxay la ahayd in diblomaasiyiintooda xarig adag ku dabreen wada hadalka Ankara ee Somaliland .
Wasiirka Madaxtooyadda Somalia ayaa Diblomaasiyiinta reer Galbeedka u sheegay in Madaxweynaha uu Casuumaad ka helay dhigiisa Dalka Turkiga ,wuxuuna meesha ka saaray in haba yaraatee Madaxda Turkiga kala hadleen wax ku saabsan wada hadal ay la yeelanayaan Madaxweynaha Maamulka Somaliland.
Inkastoon la hubin in wada hadalka Ankara wada fariisan doonaan Ahmed Siilaanyo iyo Hassan Garguurte hadana waxaa Diblomaasiyiin ka tirsan Safaaradda Turkiga ee Somalia ku xog warameen in Madaxda Somaliland dalbatay wada hadalka Ankara ,iyadoo ujeedka ugu weyn tahay sidii Dowladda Federalka ugu ogolaan laheyd in degaanadooda laga fuliyo Mashaariicda Hay''ada Tika ee Horumarinta turkiga.
Madaxda Turkiga lama ogga qorshaha u qarsoon laakiin sida muuqato Siilaanyo wuxuu ku mashquulsan yahay sidii uu kaga faa-iideeysan lahaa Mashaariicda Beesha Caalamka ee Maalgashiga Somalia.iyadoo aysan jirin wax uu ka qabo inuu aqbalo nidaamka Federalism-ka.
Tifaftiraha Waagacusub Dahir Alasow ayaa jooga Istanbul,wuxuuna saacado kadib gaari doonaa ANKARA,Iyadoo suurtagal tahay inaad heshaan warbixin dhameeystiran ,sida wax u dhici doonaan.